ကိုရီးယား ၀က်နံရိုးကင် | Wutyee Food House
« ကြက်သား နှင့် မျှစ်ကြော်ဟင်း
အိန္ဒိယစတိုင် ဆိတ်သား နှင့် ငရုတ်ပွ ဟင်း »
August 5, 2010 by chowutyee
ကိုရီးယား ၀က်နံရိုးကင်သည် ကိုရီးယားတွင် လူကြိုက်များတွေ ဟင်းလျာ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အရသာကလည်း နူးအိပြီ စားလို့ ကောင်းတာမို့ ထမင်းနှင့်လည်း တွဲဖက် စားသုံးနိုင်ပါသည်။ အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စုပြီး Barbecue လုပ်စားရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် လုပ်စားနိုင်အောင် ချက်နည်းလေးပါ ဝေမျှ ပေးလိုက်ပါတယ်…
၁။ ၀က်နံရိုး – ၅၀ကျပ်သား
၂။ ဂျင်း – လက်မ၀က်ခန့် (ထောင်းပြီး အရည်ညှစ်)
၃။ ကြက်သွန်နီ – ၁လုံး (ကြေညက်အောင် ထောင်းပါ)
၄။ ကြက်သွန်ဖြူ – ၅မွှာ (ကြေညက်အောင် ထောင်းပါ)
၅။ ငရုတ်သီး အနှစ်(Kochujang) – စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း
၆။ သကြား – စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း
ရ။ ပဲငံပြာရည်(အနောက်) – စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း
၈။ နှမ်းဆီ – စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း
၉။ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၁။ ၀က်နံရိုးများကို အတုံးအလတ်အရွယ်လောက် အတုံးလေးများ တုံးလိုက်ပါ။
၂။ ကြက်သွန်နီ များဖြင့် ၀က်နံရိုးကို သမအောင် နုယ်ပြီး ဇလုံ တစ်ခုထဲသို့ ထည့်ထားပေးပါ။
၃။ ပြီးလျှင် ၀က်နံရိုးတွင် ပါဝင်သောပစ္စည်းများ ဖြစ်သော (ချင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုတ်သီအနှစ်၊ သကြား၊ ပဲငံပြာရည်၊ နှမ်းဆီ၊ ငရုတ်ကောင်း) အားလုံး တို့ကို ရောမွှေလိုက်ပြီ ၀က်နံရိုးထည့်ထားသော ဇလုံထဲသို့ အားလုံး လောင်းချလိုက်ပါ။
၄။ ထိုဆော့ရည်များဖြင့် ၀က်နံရိုးကို သမအောင် ရောနယ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်၍ အနည်းဆုံး ၃နာရီခန့် နုပ်ထားပေးပါ။ တစ်ညသိပ်က ပိုကောင်းမွန်ပါသည်။
၅။ ၀က်နံရိုးမကင်ခင် ၁၅မိနစ်ခန့် ကြိုထုတ်ထားပေးပါ။
၆။ ထို့နောက် ၀က်နံရိုးများကို မီးအသင့်တင့်ဖြင့် တစ်ဖက်လျှင် ၄မိနစ်ခန့် အသားများ ကျက်သည်အထိ ကင်ပေးပါ။
၇။ Oven ဖြင့်ကင်လျှင် ၂၀၀ ဒီဂရီဖြင့် နာရီဝက်ခန့် ကင်ပေးပါ။
၈။ ကိုရီးယား ၀က်နံရိုးကင်ကို ထမင်းနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကြိုက်နှစ်သက်ရာဖြင့် တွဲဖက် သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ…
၁။ မုန်လာဥနီ – ၁ဥ ၊ ဘိုစားပဲ – ၇တောင့် တို့ကို ပါးပါး အစောင်း လှီးပေးပါ။
၂။ ပြီးလျှင် ဒယ်အိုးတစ်ခုထဲထင်္ည်ပြီး ရေနွေးဖြင့် ၃မိနစ်ခန့် ပြုတ်ပေးပြီ ရေအေးဖြင့် ပြန်စိမ်ထားပါ။
၃။ ထို့နောက် ဟင်းရွက်များကို ဇကာ ဖြင့် စစ်၍ ဆား(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ပုံ၁ပုံ)၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် (အနည်းငယ်)၊ နှမ်းဆီ (၅စက်) ထည့်၍ ၀က်နံရိုးကင်ဖြင့် တွဲဖက် စားသုံးနိုင်ပါသည်။
Posted in ကိုရီယားချက်ပြုတ်နည်း | 10 Comments
on August 5, 2010 at 8:46 am | Reply hmone
lan htawe loe chan kae htae ya mal…a mike sar lay…eat chin like tar naw 😉
on August 5, 2010 at 10:11 am | Reply chowutyee
heee pls try it… 🙂
on August 5, 2010 at 10:14 am | Reply ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)
၀က်နံရိုးကင်အရောင်ရော ဥနီနဲ့ ပဲသီးရဲ့ အရောင်ကရော တကယ့်ကို စားချင်စဖွယ်ပါဘဲ..
ခုလောလောဆယ် ဗိုက်တကယ်ဆာနေတာ.. ရှလွတ်..
on August 5, 2010 at 10:36 am | Reply chowutyee
မချော အားရင် လုပ်စားကြည့်ပါ… တကယ်စားလို့ကောင်းပါတယ်.. ;P
on August 6, 2010 at 3:06 am | Reply wai
ခုနကပဲ ထမင်းစားထားသေးတယ်။ ခုဝက်နံရိုးကင်တွေ့တော့ဗိုက်ပြန်ဆာလာတယ်။ 😀
on August 8, 2010 at 3:44 am | Reply chowutyee
on September 5, 2010 at 11:04 am | Reply yupar
fri where can i buy ငရုတ်သီး အနှစ်(Kochujang) ?
at city mart ?
on September 5, 2010 at 12:29 pm | Reply chowutyee
၀တ်ရည်က ကိုယ်တိုင်လုပ်တာ CityMart က၀ယ်ရင် (ကိုရီးယား) ငရုတ်သီးအနှစ်၁ဗူးကို ၅ထောင်လောက် ပေးရလို့…. 🙂
on February 8, 2012 at 1:20 pm | Reply fkthet
ဟုတ်တယ် ဒီက ကိုရီးယားတွေကင်ချီလုပ်ဖို့ ရန်ကင်းက ကိုရီးယာအစားအသောက်ဆိုင်မှာ ငရုတ်သီးအနှစ်ကော ကင်ချီငရုတ်သီးမုန့်ကော ၅၀၀၀ိပေးရတယ်တဲ့။
on February 8, 2012 at 2:27 pm | Reply chowutyee
ဟုတ်တယ်။ ကိုရီးယား ငရုတ်သီးနှစ်ဘူးကြီးက ၅၀၀၀လောက် ပေးရတယ်။ ဒါပေမယ့် ခု CityMart မှာ ၁၀၀၀တန် ကိုးရီးယားနှစ်ဘူးတွေ ရောက်နေတယ်။ အမြဲသုံးမှာမှ မဟုတ်တာ၊ ၁၀၀၀တန် ကိုးရီးယား ငရုတ်သီးနှစ်ဘူးသုံးလည်း ရပါတယ်။. 🙂